Igbo, John: Lesson 033 - Ịgwọ onye ọrịa ahụ na Bethesda (Jọn 5:1-16) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 033 (Healing of the paralytic)
1 Mb͕e ihe ndia gasiri, ememe ndi-Ju di, Jisus we rigoro Jerusalem. Ma na Jerusalem n'akuku ọnu-uzọ-ama aturu, otù ọdọ-miri di, nke anākpọ n'asusu Hibru, Bethesda, nke nwere ulo-nbata ise. 3 N'etiti ndia ka oké ìgwè madu ndi aru-ha nādighi ike, ndi-ìsì, ndi ngwurọ, ma-ọbu ndi akuku-aru-ha nwuru anwu nēche, nēche iru ijeghari miri; 4 n'ihi na mọ-ozi nārida na mb͕e ufọdu nime ọdọ-miri, we kpalie miri. Onye ọ bụla nke na-abanye na mbụ mgbe edemede mmiri ahụ gbasiri ike ọ bụla ọ bụla o nwere. Ma otù nwoke nọ n'ebe ahu, onye aru-ya nādighi ike ọria rue orú arọ na iri na asatọ. 6 Mgbe Jizọs hụrụ ka ọ dina n'ebe ahụ, ma mara na ọ nọwo na-arịa ọrịa ruo ogologo oge, ọ jụrụ ya, sị: "Ị chọrọ ka ahụ dị gị mma?" Onye ahụ na-arịa ọrịa zara ya, sị: "Nna anyị ukwu, m ga-abanye n'ime ọdọ mmiri ahụ mgbe a kpasiri mmiri, ma mgbe m na-abịa, onye ọzọ ga-agbadata n'ihu m. "8 Jizọs sịrị ya:" Bilie, buru ihe ndina gị, jee ije. 9 "Ozugbo ahụ, e mere nwoke ahụ nke oma, ma buru ura ya wee jee. Ugbu a bụ ụbọchị izu ike n'ụbọchị ahụ.
O yikarịrị ka Jizọs nọrọ ọnwa itoolu na Galili ma mesịa gbagoo Jerusalem na ememme ụlọikwuu. Ọ maara na agha nke okwukwe bụ ikpebi na Isi Obodo. Ọ bụ ezie na ọ na-abịakwute ndị na-ede iwu na ndị na-efe Chineke, O ji ikwesị ntụkwasị obi nọgide na-edebe iwu ahụ. Ugboro atọ kwa afọ ka ọ na-aga njem nsọ n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem, mgbe ọ bụla o kwere mee (Deuterọnọmi 16:16)
N'obodo obodo e nwere ọdọ mmiri, nke dị ka ụfọdụ nsụgharị Grik si mee ka mmụọ ozi kpalie ya mgbe ụfọdụ. Herọd wuru ogige gburugburu ọdọ mmiri ahụ na ogidi. A chọpụtara ihe ndị foduru nke ákwà owuwu ụzọ mbata n'oge na-adịbeghị anya. A na-akpọ usoro a "Udo nke ebere," n'ihi na ọtụtụ ndị na-adịghị ahụkebe ga-aga ebe ahụ na-achọ ọgwụgwọ - ichere mmiri ka ọ kwaga. Ha chere na onye mbụ ga-atụba onwe ya n'ime mmiri ahụ ga-agwọta ya.
Jizọs gara ọdọ mmiri a jupụtara na ndị ọrịa na Ọ hụrụ otu nwoke kpọnwụrụ akpọnwụ n'ihi afọ iri atọ na asatọ, obi ilu na ihe mgbu. Iji gbakwunye na nke a, onye na-egbu ahụ kpọrọ ndị ọzọ asị. N'ụlọ a nke ebere ọ bụ onye ọ bụla maka ya n'ihi na ọ dịghị onye nwere ọmịiko n'ebe ọ nọ. Ma o nweghi olile anya, mana ichere ohere nke di nfe iji nweta ebere Chineke. Na mberede, obi ebere Incarnate guzo n'ihu ya ma Jizọs malitere ọgwụgwọ ọrịa ya site na nke mbụ na-ese onyinyo nwoke si ọdọ mmiri ahụ n'onwe ya. Mgbe ahụ, o mere ka ọchịchọ ahụ gwọọ ya iji nweta ọgwụgwọ. Jisos nyere ya ohere ikwuputa mkpasu iwe ya, onye tiri mkpu, "O nweghi onye na-eche banyere m! Ugbua ka m choro igwo oria, ma obi ikem adighi nma: odighi onye na acho acho m ma eleghi anya i ga echere oge maka mmiri gaa, ka i wee tinye m? "
Ọ dịghị onye na-eche banyere m! Nke a ọ bụ ọnọdụ nwanna gị? Ndị ọzọ hà na-ajụ gị? Anyị na-agwa gị na Jizọs na-eguzo n'ihu gị: Ọ na-ajụ gị ma chọta gị. Ọ nwere ike inyere gị aka ma chekwaa gị. Ndị a bụ mmetụta nke onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Nlegide anya ya jutere anya Kraist, onye ebere ya mere ka mmadu nwe obi ike n'ebe Onyenwe anyi n'anya.
Mgbe Jisos huru ochicho siri ike nke nwoke a di nkpa ka agwo ya aru, na ntukwasi obi ya na Jisos nwere ike inaputa, o nyere iwu, "Bilie, buru ihe nracha gi ma jegharia." Nke a bụ iwu Chineke, na-eme ka agaghị ekwe omume. Onye ahụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ kweere okwu Kraịst ma tụkwasị obi ike nke si n'aka ya pụta, na-eche iyi ndị na-asọba n'ime ọkpụkpụ ya na ike nke mere ka ozu ya dịghachi ndụ; o nwetara ike ma gwọọ ya.
Ozugbo ahụ, ọ wụsara maka ọṅụ, bilie ọtọ ma buru ihe ndina ya n'isi wee jiri obi ụtọ buru ya. Okwukwe ya kwadoro okwu nke ike nke Kraịst, ma weta ngwọta ozugbo.
EKPERE: Onyenwe anyi Jisos, anyi ekele gi, i meghi ihe ojoo a, ma i ghaghi igosi ya obi ebere gi. Ọ dịghị onye ọ bụla ma ọ bụ gị, Onye na-eme ebere. Nyere anyị aka ijide gị, ma ghara ịdabere na enyemaka mmadụ. Gbanwee anyị n'iche nke ịhụnanya gị, ilekọta ndị ọzọ, na-eso ha kerịta ngọzi gị.
Olee otú Jizọs si gwọọ onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'akụkụ ọdọ mmiri Bethesda?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:56 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)